‘Tsy Hitolo-batana Izahay’: Feon’ny Mpanohitra Manohana Ny Media Nataon’i Tiorka Fahirano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2016 10:28 GMT
Tamin'ny 31 Oktobra, nanao bemidina tao amin'ny foiben'ny Cumhuriyet, gazety mpivoaka isan'andro miisa 50.000 mahery manerana an'i Torkia, ao Istanbul ny polisy. Ankoatra ny bemidina tao amin'ny birao, nosavaina ny tranon'ireo 13 mpitantana ny gazety ary nosamborina koa ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra Murat Sabuncu.
Laharana faha-151 amin'ny tondro momba ny fahalalahan'ny gazety manerantany navoakan'ny Reporters Without Borders i Tiorka. Azo inoana fa hihemo-daharana amin'ny taona hoavy ny firenena, noho ireo mpanao gazety 127 voasambotra teo anelanelan'ny fanafihana vao haingana sy ny fikasana hanongam-panjakana tamin'ny Jolay. Mpanao gazety hafa ihany koa no niharan'ny fandraràna tsy hivezivezy.
Nitondra tany amin'ny fotoam-pitsarana nitoriana an'i Can Dundar, lehiben'ny tonian-dahatsoratra teo aloha tao amin’ ny gazety, sy Erdem Gul, lehiben'ny birao ao Ankara izany fanadihadiana izany. Tamin'ny volana Mey tamin'ity taona ity, nahazo sazy dimy taona mahery an-tranomaizina i Dundar sy Gul. Navela handao ny fonja miandry ny fitsarana ambony i Dundar, izay tafala tamin'ny fikasana famonoana tao ivelan'ny trano fitsarana, ary monina ao Alemaina ankehitriny. Niala tsy hoe lehiben'ny tonian-dahatsoratra intsony izy, raha mbola miandry ny valin'ny fangatahana fitsarana ambony ao Torkia kosa i Gul.
Tamin'ny Septambra lasa teo, azon’ny gazety miaraka amin'ny Satropotsy, ny loka Right Livelihood, fantatra kokoa amin'ny anarana “Loka Nobel Alternative”.
Anisan'ireo notanana ihany koa i Bülent Utku, mpisolovavan'ny gazety, mpanao gazety malaza Aydin Engin sy mpanao sariitatra Musa Kurt.
Niteny nanohitra ny fisamborana ireo mpanao politikan'ny CHP.
Taorian'ny nivoahan'ny vaovao mikasika ny fanafihana, nivory mba hanao fihetsiketsehana tao amin'ny foiben'ny gazety ao Istanbul ireo mpamaky sy mpanohana ny Cumhuriyet. Voatifitry ny tafondro-drano ireo mpanao fihetsiketsehana ary mpianatra fito no notanana, na dia navotsotra aza izy ireo avy eo
Mpamaky ny @cumhuriyetgzt eo anoloan'ny tranoben'ny gazety mba hampiseho firaisan-kina manoloana ny fanafihana ataon'ny polisy sy ny fihazonana ireo mpanoratra.
Tsy navela hahazo mpisolovava ara-dalàna ireo mpitantana sy mpiasan'ny gazety nogadraina. Narahin'ny fandraràna fitantaràna momba ny fisamborana ihany koa ny fanafihana.
Tamin'ny endriny maro ny fanentanana mamely ny Cumhuriyet. Tamin'ny 2 Novambra, nanoratra tao amin'ny Sabah, gazety akaiky ny antokon'ny fitondrana, antokon'ny Fampandrosoana sy ny Fahamarinana (AKP) ny mpanoratra iray tsy fantatra anarana milaza fa mpiasa taloha tao amin'ny gazety, nilaza izy fa nahazo fanampiana ara-bola goavana avy amin'ny fikambanana mifandray amin'ny Gulen ny Cumhuriyet tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Nanokatra fanadihadiana mikasika izany fanambarana izany ny Birao Misahana ny Famotoroana Heloka Bevava Ara-bola.
Mpaneho hevitra maro samihafa, anisan'izany ny depiote AKP teo aloha Resul Tosun, izay nilaza fa tsy naneho mazava ny fanohanana ny Gulenista mihitsy ny fanambarana. Nanamarika mihitsy aza ny sasany fa ilay mpanao gazety voasambotra Hikmet Cetinkaya no mpanoratra ireo boky maromaro mitsikera an'i Gülen, na dia tsy nanakana ny Sabah hiampanga ny fiovan'i Cetinkaya hiaro ny Gulenista aza izany.
Mahatsikaiky, natao famotorana noho ny fifandraisana amin'i Gulen ihany koa ny iray amin'ireo mpampanoa lalàna voatendry hisahana ny raharaha Cumhuriyet. Misokatra ankehitriny ny fanadihadiana momba ny fampihorohoroana hanenjehana ilay mpanao gazety, Baris Pehlivan namoaka ity rohy ity.
Tamin'ny volana lasa, namoaka lahatsoratra ny Cumhuriyet izay milaza fa niezaka hifehy indray ny gazety ireo mpitantana teo aloha.
Anisan'ireo miampanga ny gazety ho mifandray amin'i Gulen ireo mpitantana ny gazety teo aloha, Alev Coskun sy Mustafa Balbay, izay solombavambahoakan'ny CHP ankehitriny. Nitory noho ny fanovana birao 2013 izay nanilikilika azy mirahalahy i Coskun, heverina noho ny tolo-tsain'i Erdogan.